Ny Hetra Hiverina Any Danemark - Ny mpahay lalàna any Danimarka. Rehetra ny mpisolovava an-Tserasera
ny mpampiasa, ny vola fisotroan-dronono ho nianatra, banky, sns.
Maro taxable olona tsy manana fanazavana bebe kokoa ny fanambarana ara-bola. Noho izany, dia tsy maintsy ihany marina ny fanambarana ara-bola, raha toa ka misy diso na mahantra vaovao, raha oharina amin'ny vola miditra sy ny fradragsbeløb nitatitra ny hetra fitantanan-draharaha avy amin'ny mpampiasa, ny vola fisotroan-dronono ho nianatra, ny banky miaraka bebe kokoa. Raha toa ianao ka mendrika ny hetra any Danemark sy ianao ka tsy nandray ny hetra isan-taona hiverina any amin'ny martsa, dia tsy maintsy hamoaka ny vola miditra, na dia tsara na ratsy. Afaka milaza momba ny hetra mihoatra noho izay ianao dia afaka miditra ao amin'ny NemID na nomerika fanompoana fehezan-dalàna. Oplysningsfristen no. Fa ianao manana ny fidiram-bola na deductions ivelan'ny Danemark, dia tena-miasa, amin'ny kokoa, dia oplysningsfristen. Rehefa niditra daholo ny vola miditra sy ny deductions no namorona, ary avy hatrany ny hetra. Izany dia mampiseho na efa nandoa be loatra ny hetra ary rehefa ianao dia mahazo ny vola miverina na raha misy kajy ny hetra fanampiny fa tsy maintsy mandoa vola.
Raha toa ianao ka tena-miasa, ianao dia afaka mahita ny vaovao fa dia nitatitra ny hetra fitantanan-draharaha ao amin'ny nomerika fanompoana tab, ao amin'ny 'ny Hetra vaovao'.
Mba hiantohana ny tena hetra manana rehetra amin'ny firenena tavaratra, ny fitsipika mikasika ny mpampiasa, ny banky ary ny hafa mba hanome loharanom-baovao ny hetra manam-pahefana momba ny fandoavana ny karama, ny fisotroan-dronono, sarobidy, mahaliana, sns. ny mpandray ny anarana sy ny adiresy, ny karazana fidiram-bola izany, ary ny vola ny fanjakana. Ny adidy ny manome ny vaovao dia ahitana ihany koa ny payouts ny olona izay monina any amin'ny firenena hafa. Mba hahazoana antoka marina ny hetra, dia ny firenena tavaratra nanaiky ny hizara vaovao. Ny fifanakalozam-mitranga isan-taona eo amin'ny voatondro sampana amin'ny hetra amin'ny manampahefana sy amin'ny alalan'ny fiarovana ireo fantsona.
Nifanakalo be dia be ny fanazavana eo amin'ny firenena tavaratra.
Io fanazavan io dia ampiasaina amin'ny alalan'ny fandoavan-ketra manam-pahefana ao amin'ny firenena-ponenana mba ho azo antoka fa ny olona miampita sisintany asa efa vita ny adidy ny mba hamoaka ny vola miditra sy ny fananana ireo dia efa any ivelany.
Tompony, ny raki-bolana malalaka
Dibortzio-eta ekonomia - nola zatitu zure komunitate jabetza